Home › News› बिजिडब्लुएसको दशौं वार्षिक भेटघाट
ब्रिटिश गोर्खाहरुको हकहितका लागि बेलायतको सुप्रिम कोर्टदेखि मानवधिकारको यूरोपियन न्यायलयसम्म लड्दै गरेको संस्थाले दश वर्ष पूरा गरेको छ । सहभागी जमात सबैजसो हरियो मैदानमा घाम ताप्दै पेय पदार्थ लिँदै बारबिक्यूको स्वाद लिइरहेका थिए । दिन रमाईलो त थियो नै र रमाईलो बनाउन पनि विभिन्न खेल खेलाएका थिए । रामधन राईको आयोजनामा “आँखा छोपी बललाई बास्केटमा लगाउने” लेडिजहरुका लागि चम्चामा अण्डा राखेर दौडने खेल, श्रीमान्/श्रीमतीबीच बेलुन फुटाउने खेलहरुमा धेरैजना सहभागी भएका थिए । रेडियो विजिडब्लुएसले प्रत्यक्ष प्रशासण पनि गर्यो । रेडियोका स्वंयसेवक प्रशारिकाहरुको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो । रेडियोको सहयोगार्थ महिनावारी दुई पाउण्ड डाइरेक्ट डेविटका फर्महरु पनि स्वेच्छाले भरेका देखिन्थे । जी इनर्जीको पनि स्टल राखिएको थियो । जीइनर्जी नेपालीहरुद्वारा सञ्चालित पहिलो ग्याँस र विजुली आपूर्ति कम्पनी हो । राफल ड्र, बिङ्गो र लक्की डिप खेलाइएको थियो । लक्की डिपमा श्रीमती छत्र ज्योति राई र सहयोगीहरुले मेहनत गरेका थिए । इभेन्ट कोर्डिनेटर पदम राई (बिईएम) र महासचिव क्षत्र राईद्वारा सञ्चालित विङ्गो अति रमाईलो देखिन्थ्यो । राफलका पुरस्कारहरु गोर्खा रिर्शोसेश, गोर्खा सेक्यूरिटी सर्भिसेस्, जिइनर्जी र यूनिभर्सल सेक्यूरिटी सर्भिसेसबाट प्राप्त भएको थियो ।
लक्की डिपबाट संकलित रकम ३ सय ८३ पाउण्ड “नयाँ युवा”लाई र बिङ्गो खेलबाट संकलन रकम रेडियो बिजिडब्लुएसलाई त्यस्तै राफलबाट संकलित विजिडब्लुएसलाई दिइऩे जनाएको छ । उक्त दिन सम्पूर्ण पुरस्कार संस्थाका सदस्य र केही पाहुनाबाट पनि प्राप्त भएको थियो । अध्यक्ष मे.रि. टिकेन्द्र दल देवानले संस्थाका तर्फबाट संकलित ५ सय ७५ पाउण्ड स्वं. प्रेम राईका धर्मपत्नीलाई हस्तान्तरण गरे । स्मरण रहोस्, प्रेम राईको गतबर्ष अल्पआयुमा नै निधन भएको थियो र संस्थाका सक्रिय सदस्य थिए । संस्थाका उपाध्यक्ष उमेन्द्र गुरुङ Community Policing Award 2013 अन्तर्गत “Diversity Champion of the year” बाट सम्मानित भएकोमा संस्थाका तर्फबाट पनि सम्मान गर्यो र संस्थाकै सदस्य चन्द्रबहादुर राईको छोरी निलम राई PCSO मा पहिलो नेपाली पहिलो भई कार्य सुरुआत गरेकोमा बधाईको पात्र बनिन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको पाँचौ साधारणसभा तथा कार्यसमितिको निर्वाचन १५ सेप्टेम्बरमा हुन गइरहेकोले संस्थाका तर्फबाट संधै नै प्रतिनिधि क्रियाशील छन् । आउने निर्वाचनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि संस्थाका सदस्यद्वय थर्क सेन र एकराज नेम्वाङ्गले सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए ।
“बिजिडब्लुएस नेपाली मिडियामा कमै मात्रमा देखिए तापनि संस्थाको नाम राष्ट्रियस्तरमा पहिचान भैसकेको छ र सरकारले पनि मान्यता दिएको अवस्था छ । त्यसैले काम गर्नु आवश्यक छ तर खोक्रो ढोल पिट्नुको अर्थ रहँदैन । जब २००८ सालमा जोना लुम्लीलाई व्यक्तिगत पत्र पठाउँदा अपमानको सिमा रहेन, बोल्नेले जथाभावी बोले, लेख्नेले त्यस्तै लेखे तर त्यही व्यक्ति, समूहले त्यो कुरा त ठीक रहेछ भन्छन् अहिले । सधैं सत्यमा विश्वास गरौं, सफल अवश्य एक दिन हुनेनै छ । धेरै जनालाई पेन्सनको मुद्दाबारे चासो होला र हुनु पनि पर्ने किनकि समय धेरै गैसक्यो । यूकेमा रहेको न्यायलयमा न्याय नपाएपछि बाध्यतावश यूरोपको न्यायलय जानु पर्यो । कानुनी लडाइँ लड्नुमा ठूलो धनराशि जरुरत छ । हामीबीच उठेको रकम सुप्रीम कोर्ट नपुग्दै रित्तिइ सकेको थियो । बाँकी रकम कसरी बुझाउने ठूलो आपत्ति आइलागेको परिस्थिति थियो तर भनाई छ, “भगवानले भन्छ तिमी आँट म पुर्याउँछु” त्यही सावित भयो । विजिडब्लुएसको नाम र कामलाई चिनेका व्यक्ति जो आज हामीसामु छैनन् तर उहाँले ठूलो अनुदान छोडेर गएका रहेछन् । हाम्रो बाटो यसरी नै खुल्दै गयो र सुगम हुँदै गएको छ । २० मे २०१३ भित्रमा बेलायत सरकारले लिखित जवाफ मानवधिकारको यूरोपियन न्यायलयलाई दिनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म सरकारले दुई पटकसम्म म्याद थप्न अनुरोध गरेको छ कोर्टलाई । सायद हाम्रो लागि सही हुन सक्छ किन कि ब्रिटिश सरकारलाई साह्रो गाह्रो भएको प्रष्टै देखिन्छ, देवानको भनाई थियो । ”
बेलायतस्थित प्रायः संघ/संस्थामा बिशष भूमिका निभाएका व्यक्तित्वहरु नै बिजिडब्लुएसका सदस्य भएकाले पाहुनाहरुको संख्या सधैं कमै नै रहन्छन् । नाम लिनु नै पर्दा क्या.रि. हितमान गुरुङ, (MBE), थर्क सेन, मे.रि. कुलबहादुर थापा, दुत पुन, पदम राई(BEM), राजेन्द्र राना, रामधन राई, शेरबहादुर सुनार, डिलराज गुरुङ, मुछेत्र गुरुङ, मीन गुरुङ, ओम थापा, मे.रि.सोनाम शेर्पा, राम गलामी, रसबहादुर गुरुङ ऑदि सबै संस्थाका सदस्यहरु नै हुन् ।
भेटघाट रेष्टुरेण्ट अल्डरसटका प्रबन्धक शेरबहादुर सुनारले खानाको बन्दोवस्त गरेका थिए । दशौं वर्षको भेटघाट भएको र सुनार पनि संस्थाका पुरानो सक्रिय सदस्य भएकाले दशक भरिकै उत्तम खाना खुलाएका थिए । दिउ“सो भरिनै बारबिक्यू र बेलुका डिनर राखिएको थियो । बिशेष फलफूलहरुको डेकोरेशन देखेर मानिस चकित परेका थिए ।